Faysal Cali Waraabe Oo Ka Hadlay Xidhiidhkii Ka Dhexeeyay Gaani Iyo Eedaynta Madaxweyne Siilaanyo Ku Tilmaamay Inuu Ahaa Ninkii Basaasay Dhalinyaradii UFO | Araweelo News Network (Archive) -
Faysal Cali Waraabe Oo Ka Hadlay Xidhiidhkii Ka Dhexeeyay Gaani Iyo Eedaynta Madaxweyne Siilaanyo Ku Tilmaamay Inuu Ahaa Ninkii Basaasay Dhalinyaradii UFO
Hargeysa(ANN)Guddoomiyaha Xisbiga mucaaridka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa dafiray inuu basaasay dhalinyaradii iyo aqoonyahanadii reer Somaliland ee uu taliskii Siyaad barre xidhay horaantii sideetameeyadii, taas oo marar baddan lagu eedeeyay inuu kaalin weyn ku lahaa,
isla markaana Madaxweyne Siilaanyo oo xalay ka hadlay arrimo baddan uu soo qaaday xidhitaankii dhalinyaradaa iyo doorkii uu ku lahaa Faysal.
Hase yeeshee Faysal Cali Waraabe waxa uu qiray inuu xidhiidh saaxaabtinimo la lahaa Gaani, kaas oo uu ka gaabsaday inuu sharaxaad ka bixiyo nooca uu ahaa xidhiidhkii uu la lahaa Taliyihii ciidamadii qeybta 26-aad ee Soomaaliya Maxamed Xaashi Gaani oo marar baddan siyaasiyiin waaweyn iyo aqoonayahano siyaabo kala duwan usoo weriyeen inay wada shaqayn iyo saaxiibtinimo qoto dheeri ka dhaxaysay.
Guddoomiyaha UCID oo waraysi siiyay maanta telefishanka Horn Cable, isagoo daba socda jawaab Madaxweyne Siilaanyo ka bixiyay hadalo canbaarayn ah oo uu Faysal maalmihii la soo dhaafay ku faafiyay qalabka warbaahinta, isla markaana ku eedeeyay Faysal inuu ahaa basaas xiligii halgankii ayuu jawaab ka bixiyay gudoomiyaha UCUD.
Faysal Cali Waraabe oo wajigiisa ay ka muuqatay deganaansho la’aan waxa uu ka hadlay arrinta ururkii UFO waxaanu yidhi. “Aniga wuxuu ceeb iiga dhigay Madaxweynuhu UFO ayuu basaasay, UFO kiiskeeda maxkamad ayaa la saaray, intaan Anigu ka soo galayna waxay ahayd Gaani (Taliyihii Ciidankii qehybta 26-aad ee Soomaaliya) ayay is yaqaaneen, maxkamad ayaa la saaray cidii la xidhiidhay waa la garanayaa. Ragii NNS-ta ahaa Cabdilaahi Cirro (Wasiirkii hore ee daakhiliga), Waran cade (wasiirkii hore ee duulista) way joogaan sharaftaan ku lahaa Somaliland iyo Soomaaliyaba waligay basaas la iguma sheegin.”
“Anagu (mucaaridka) haddii aanu nahay waxaanu ka hadalay xaalada dalkeenu marayo oo ah shaqada mucaaridka waliba waxaanu go’aansanay inaanu muddo hal sano ah xukuumadda u dul qaadano oo aanu eegno. Waxaanu ka hadalay waxay ahayd dhibaatada aanu u aragno inay dhacayso iyo siyaasadaha anaan jeclayn in wadankeena lagu maamulo. Waana waajib haddii aanu nahay axsaabta mucaaridka,”ayuu yidhi Guddoomiyaha UCID oo caawa u waramayay TV-ga Horn Cable.
Faysal Cali Waraabe waxa uu xukuumada ku eedeeyay dulqaad yaraan, waxaanu yidhi “Waanu ka filaynay dawlada Axmed Siilaanyo dulqaad yaraanteeda waanu naqaanay in badana waanu ka hadalay todoba bilood ka hor ayaan idhi dawladeenu ma dulqaadanayso. Laakiin waxa nagu cusbaa wakhtiga uu Madaxweynuhu hadlay iyo xaalada markii uu TV-ga ka hadlayay iyo Wakhtigii uu hadlayay 2-dii habeenimo iyo wixii laga bilaabo ayuun bay ahayd waxa kaliya oo uu yeedhay TV-ga qaranka iyo Somaliland.Org way hurdeen dadkii kale oo dhami.”